महिलाको 'प्राइभेट पार्ट'का समस्या चानचुने होइन : डा अचला वैद्य
योनीबाट सेतो पानी वा गन्हाउने पानी बग्ने, यौनांग चिलाउने, दहीको छोक्रा जस्तो सेतो पदार्थ आउने जस्ता समस्या लिएर महिलाहरू आउने गरेका छन्।
महिनावारी सुकेपछिका जोखिमहरू लिएर पनि आउँछन्। महिनावारी सुकेपछि पनि रगत आइराख्ने समस्या एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। सामान्य होला भनेर सुरुमा ख्याल राख्दैनन्, पछि त्यसले डरलाग्दो रूप लिन्छ । महिनावारी सुक्ने समस्या पनि नेपाली महिलामा धेरै पाइएको छ। सुकेपछि पनि एक–दुई थोपा बगिरह्यो भने निकै होसियार हुनुपर्छ । रातो टीकाजत्रो साइजको रगत बग्यो भने पनि केही डरलाग्दा लक्षण पो हुन् कि भनेर सचेत हुनुपर्छ।
युवा उमेरमै महिनावरी नसुक्दै सेतो पानी जाँदा भेजाइनल संक्रमण ठानेर सामान्य सरसफाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । तर उपचार नगरेको खण्डमा त्यो संक्रमण पाठेघरसम्म पुग्छ । पाठेघरमा गइसकेपछि फ्यालोपिन ट्युबमा जान्छ र संक्रमण पेटसम्म पनि पुग्छ।
पिआइडी–पल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनिन्छ यसलाई । हेर्दाखेरी सामान्य भेजनाइटिजबाट पिआइडीमा टर्न हुन्छ । त्यसपछि महिलाहरूलाई एकदम गाह्रो भइराखेको हुन्छ । तल्लो पेट दुख्छ । गर्भवती हुँदा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यो भनेको बच्चा अन्तैतिर गएर बस्नु हो । त्यसैले यस्तो समस्यालाई यत्तिकै लिनुहुन्न।
योनी चिलाएर आउने समस्या पनि चानचुने होइन। म कहाँ जचाउन आउनेलाई एकचोटि बायोस्पी गर्न सुझाउँछु। यस्तो अवस्थामा पनि झन्डैझन्डै क्यान्सर हुन सक्ने लक्षण हामीले पाएका छौं। त्यो अवस्था आयो भने हामी त्यसको भल्भाको पूरै एक तह निकालेर सामान्य अपरेसन गर्छौं।
हरेक महिलाले एकचोटि जेनेरल चेकअप गर्नैपर्ने हुन्छ। कुनै समस्या छ र जचाउँदा पनि रोग निको भएन भने अरू दुई–तीन जना डाक्टरसित पनि परामर्श लिन जरुरी हुन्छ । ३५ वर्ष पुगेका हरेक महिला जो यौन जीवनमा सक्रिय छन्, उनीहरूले समय–समयमा चेकअप गराइराख्नुपर्छ।
- (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा अचला वैद्य नर्भिक हस्पिटलमा कार्यरत छिन्।)
कभर स्टोरी : असावधानीले जटिलता निम्त्याउने महिलाका रोग
१. गैँडाकोट नगरपालिकामा ‘सुत्केरी आमा पोषिलो खाना’ कार्यक्रम लागू
२. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलित, इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा ठप्प
३. हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमणबाट दुईको मृत्यु
४. कर्मचारी समायोजन : फाजिलमा रहेका कर्मचारीले कुन कार्यालय उल्लेख गर्ने?
५. संकटग्रस्त स्वास्थ्य–५ : त्रुटिपूर्ण संरचनाले सेवा प्रवाहमा सकस
६. सिरहाको दलित बस्तीमा डा केसीले दिए उपचार सेवा
७. आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्राथमिकतामा : उपप्रधानमन्त्री यादव
८. टिचिङ अस्पतालको निर्देशकमा डा प्रेम खड्गा, भन्छन्- पत्र बुझेको छैन
९. भारतबाट औषधि ल्याउन सेटिङ मिलाउने भन्दै घुस लिने अनुसन्धानका सूचकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
१०. गैर सरकारी चिकित्सकले पनि भने - स्वास्थ्य बाहिरको सचिव मान्य हुँदैन